အမည် သညာ ဖွင့်ဆိုချက် တွေနဲ့..လက်တွေ့ အမှန် နဲ့ကွာခြားတတ်တဲ့.. သဘော သဘာဝ တချို့ပေါ့။
နိဂုံးဆွဲ ထား တာက.. တွေးစရာလေး ပါ။
အလုပ်မှာ အဆင်ပြေလို့ တော်သေးတာပေါ့း) ကားအဝေးကြီးမောင်းရတာတော့ အဆင်မပြေဘူးနော့် အန်ကယ် ဂရုစိုက်အုံး အားလုံးအိုကေပါစေဗျာ........။
ဒါကဒီလိုရှိတယ်။ ဒီလိုရေးထားတယ်။ ဒါလုပ်ဖို့ ထားထားတယ်..........တွေ ရေးထား၊ ပြောထားတဲ့အတိုင်းသာ ဖြစ်နေရင်၊ ဖြစ်စေချင်ရ၊ ဖြစ်အောင်လုပ်နေရင် တကယ့်လက်တွေ့လောကကြီးနဲ့ ကင်းကွာသွားမှာပေါ့ဗျာ။
ွှThis is L.A !!! အကိုရေ့  ...
မနက် ၃နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီဖရီး က ဝေး ချင် ဝေးမှာပါ...။
တော်သေးတယ် ..ကိုအောင် ပြိုင်ကားမ၀ယ်မိလို့ ...။
kay - မကေ ပြောတာက ပိုမှန်နေပါရော့လား။
တူမောင်မျိုး - ပို့သသောမေတ္တာနဲ့ အဆင်ပြေနေလျက်ပါ။
ကလူသစ် - ငြင်းချက် ထုတ်ဖို့ မရှိပါကြောင်း။
moe cho thin - i love L. A. though i don't love the freeway. :)
thorn museum - နောက် နှစ် တရာ အလုပ်လုပ်ပြီးရင် ကျနော် ပြိုင်ကားဝယ်မယ်ဗျ။